Ndi OnePlus Band bu onye osompi nke Xiaomi Mi Band 5? | TeraNews.net
na-ede akwụkwọ Nikitin Eugenius E bipụtara 04.01.2021
Enweghị ahụmahụ na mpaghara ọ bụla, ọ ga-ekwe omume ịmalite ngwaahịa na ahịa dị ka ọnọdụ abụọ si dị. Mepụta ihe ọhụrụ na pụrụ iche. Ma ọ bụ, were echiche nke onye asọmpi, gbanwee ya ma chee ya n'okpuru akara ngosi gị. BBlọ ọrụ BBK, na-ekwupụta ntọhapụ nke OnePlus Band, kpebiri na nhọrọ nke atọ. Were Xiaomi Mi Band 5 dị ka ntọala ma mee ka ọ dị jụụ. Na-ekpe ikpe site na ọdịdị ahụ, onye nrụpụta na-ala azụ ogologo oge ma ghara ịme otu akwụkwọ nche Xiaomi.
Insider Ishan Agarwal dere na Twitter na ngwaahịa ọhụrụ a bụ onye na-agba aka na Xiaomi Mi Band 5 n'ihe gbasara ọrụ na ọnụahịa. AMOLED ihuenyo 1.1 sentimita asatọ, IP68 nchedo, obi ọnụego nlekota. Enwere mkpebi siri ike nke saturation oxygen ọbara. Ọnụahịa OnePlus Band bụ $ 35.
Enweghị ihe ịrịba ama nke asọmpi na Xiaomi Mi Band 5 ebe a. Ọ bụrụ naanị n'ihi na arụmọrụ nke OnePlus Band na-adọrọ mmasị karị. Maka obi ụtọ zuru oke, naanị NFC modul na-efu. Ma ọ bụ ihe ihere na ndị nrụpụta ahụpụtaghị nke a. E kwuwerị, ụwa dum agbanweela na teknụzụ ikuku a ogologo oge. Ka OnePlus Band na-efu $ 5 ọzọ. Mana ọ bụ ihe na-atọ ụtọ maka ndị na-azụ ahịa. Ka anyị nwee olile anya na n'adịghị ka XiaomiOnePlus agaghị arapara na otu imewe, mana ọ ga-ahapụ ngwaahịa ndị ọzọ na-atọ ụtọ.
Casio G-Shock GSW-H1000-1 - Smart Elekere
Kia EV6 - ụgbọ ala nke ọdịnihu meriri Europe
Njikọ HDMI: eriri, TV, ọkpụkpọ mgbasa ozi - iche
Starlink Satellites kpochapụrụ ịntanetị
Tenda AC19 AC2100 - ụlọ Wi-Fi rawụta